အိုင်စီဂျေ- ဂမ်ဘီယာ တရားရေးဝန်ကြီး အဘူဘာကာ တမ်ဘာဒူကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်
အိုင်စီဂျေ- ဂမ်ဘီယာ တရားရေးဝန်ကြီး အဘူဘာကာ တမ်ဘာဒူ...
25 พ.ค. 2563 - 22:48 น.
ဘီဘီစီ။ ။မြန်မာဘက်က အိုင်စီဂျေအမိန့် လိုက်နာမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ပထမအစီရင်ခံစာ တင်သွင်းပြီးပြီလို့ သိရပါတယ်။ ဒီအစီရင်ခံစာနဲ့ပတ်သက်လို့ တရားရုံးဘက်က ဂမ်ဘီယာကို အကြောင်းကြားထားပြီးပြီလား။
အဘူဘာကာ တမ်ဘာဒူ။ ။မြန်မာနိုင်ငံက တင်သွင်းတဲ့ တရားရုံးအမိန့် လိုက်နာမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အစီရင်ခံစာကို တရားရုံးကတစ်ဆင့် ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံ ဘက်က လက်ခံရရှိပြီးပါပြီ။ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ဒီအစီရင်ခံစာကို လေ့လာ သုံးသပ်ဖို့ထိတော့ အချိန်အလုံအလောက် မရသေးပါဘူး။ မြန်မာဘက်က နောက်ဆုံးထား တင်သွင်းရမယ့်ရက်က မေလ ၂၃ ရက် စနေနေ့က ဖြစ်ပြီး မြန်မာဘက်ကတော့ တစ်ရက်စောပြီး သောကြာနေ့က တင်သွင်းခဲ့တယ်လို့ ကျွန်တော် ယူဆပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ဒီအစီရင်ခံစာကို ဖတ်ကြည့်နေတုန်းပဲ ရှိပါသေးတယ်။ ဒါက အပြုသဘောဆောင်တဲ့ ဖြစ်ထွန်းမှု တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါက ဘာကို ပြသလဲဆိုရင် ကျွန်တော်အရင်က ပြောခဲ့ဖူးသလို ဒီအမှုနဲ့ပတ်သက်ရင် မြန်မာနိုင်ငံဟာ နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းမှာ တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှုရှိတဲ့ နိုင်ငံဆိုတာ ပြသနေပါတယ်။ ဒီလို တာဝန်ယူမှုတာ၀န်ခံမှု ခံယူချက်မျိုးနဲ့ မြန်မာဘက်က တရားရုံးရဲ့ ကြားဖြတ်စီမံ ဆောင်ရွက်ချက် အမိန့်ကို လိုက်နာကြောင်း အစီရင်ခံစာ တင်သွင်းတာပါ။ ဒါက ကြိုဆိုရမယ့် ဖြစ်ထွန်းမှုတစ်ခုပါ။
ဒါက ပထမဆုံးအစီရင်ခံစာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ ဒီအစီရင်ခံစာတင်ပြီးနောက် ၆ လတိုင်းမှာ ဒီလိုအစီရင်ခံစာ တင်ရဖို့ ရှိပါတယ်။ ဒါက ဆက်လုပ်နေရမယ့် လုပ်ငန်းစဉ်ပါ။
ဘီဘီစီ။ ။အခု အစီရင်ခံစာကို အသေးစိတ် မလေ့လာရသေးပေမယ့် ဘာတွေပါဝင်ဖို့ မျှော်လင့်ထားလဲ။
အဘူဘာကာ တမ်ဘာဒူ။ ။ဒီအစီရင်ခံစာထဲမှာ ပါဝင်လာဖို့ ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ထားတာကတော့ မြန်မာဘက်က လက်ဆုပ်လက်ကိုင်ပြနိုင်တဲ့ အရေးယူဆောင်ရွက်ချက်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ရိုဟင်ဂျာတွေကို လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှု မဖြစ်အောင် ထိန်းသိမ်းလုပ်ဆောင်နေပါတယ်ဆိုပြီး တရားရုံးကို ဖော်ပြလျှောက်ထားရုံသက်သက်မဟုတ်ဘဲ တကယ်ပဲ လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုမဖြစ်အောင် ခိုင်မာတဲ့ အရေးယူဆောင်ရွက်ချက်တွေ ဒီအစီရင်ခံစာမှာ ပါဖို့ လိုပါတယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေ အန္တရာယ်မဖြစ်စေဖို့ မြန်မာမှာ တာဝန်ရှိပါတယ်။ နောက်ပြီး တရားရုံးအမိန့်ထဲမှာ ပါဝင်သလို သက်သေအထောက်အထားတွေကို မြန်မာဘက်က မပျက်မစီး ထိန်းသိမ်းတဲ့ ဆောင်ရွက်ချက်တွေ ဒီအစီရင်ခံစာမှာ ပါဖို့ ကျွန်တော်တို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
ဘီဘီစီ။ ။ပြီးခဲ့တဲ့ ၄ လအတွင်း ဂမ်ဘီယာဘက်က လေ့လာစောင့်ကြည့်မှုတွေအရ မြန်မာဘက်က ဒီအချက်တွေကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့ ယူဆပါသလား။
အဘူဘာကာ တမ်ဘာဒူ။ ။ကျွန်တော်ဒါကို မှတ်ချက်အများကြီး မပေးချင်ပါဘူး။ မြန်မာဘက်က တရားရုံးအမိန့်အတိုင်း ပထမအစီရင်ခံစာ တင်သွင်း တာက အပြုသဘောဆောင်တဲ့ ကြိုဆိုသင့်တဲ့ တိုးတက် ဖြစ်ထွန်းမှုလို့ပဲ ပြောချင်ပါတယ်။ မြန်မာအနေနဲ့ တရားရုံးနဲ့ ဆက်လက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ နောက်ပြီး မြန်မာအနေနဲ့ ကမ္ဘာကို ပြသဖို့ အခွင့်အလမ်း ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စွပ်စွဲချက်တွေက မှားယွင်း ပါတယ်ဆိုပြီး တရားရုံးမှာ သက်သေပြဖို့ အခွင့်အလမ်းတစ်ရပ် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့က ဒီပထမအစီရင်ခံစာ တင်သွင်းတာကို ကြိုဆိုပါတယ်။
ဘီဘီစီ။ ။လောလောဆယ် ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါဖြစ်နေတော့ ဒီရောဂါကြောင့် တရားရုံးလုပ်ငန်းစဉ်တွေအပေါ် ထိခိုက်နိုင်လား။
အဘူဘာကာ တမ်ဘာဒူ။ ။စိတ်မကောင်းစရာကတော့ ကိုဗစ်-၁၉ ကြောင့် ကမ္ဘာပေါ်က လူတွေရဲ့ဘဝတွေအပေါ် ရှုထောင့်မျိုးစုံကနေ ထိခိုက်နေပါတယ်။ ဒီအမှုအပေါ်လည်း သက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော်တို့ဟာ အချက် ၂ ချက် စဉ်းစားမိပါတယ်။ ပထမတစ်ချက်ကတော့ တရားရုံးက ချမှတ်ထားတဲ့ အချိန်ဇယားအတိုင်း တရားရုံးကို အဆိုလွှာ (Memorial) တင်သွင်းနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ အနေအထားပါ။ ဒီလုပ်နိုင်စွမ်းအနေအထားက ကိုဗစ်-၁၉ ကြောင့် အများကြီးထိခိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဂမ်ဘီယာကို ကိုယ်စားပြုဆောင်ရွက်နေတဲ့ ဥပဒေအကျိုးဆောင်ကုမ္ပဏီက အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ အခြေစိုက်ပါတယ်။ ဝါရှင်တန်ဒီစီမှာပါ။ ကိုဗစ်-၁၉ ကြောင့် အမေရိကန်ရဲ့ တချို့အစိတ်အပိုင်းတွေမှာ လော့ခ်ဒေါင်း ချထားပါတယ်။ ဒီအခြေအနေမှာ ကျွန်တော်တို့ ရှေ့နေတွေ အလုပ်လုပ်ဖို့ အလွန်အမင်း အခက်အခဲ ကြုံရပါတယ်။
မြန်မာ နဲ့ ဂမ်ဘီယာ နှစ်ဖက် လျှောက်ထားချိန် ၃ လ ရွှေ့ဆိုင်း
မြန်မာလိုက်နာဆောင်ရွက်ရမယ့် ကြားဖြတ်စီမံချက် ၄ ချက်
ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံမှာလည်း ကိုဗစ်-၁၉ ကြောင့် အရေးပေါ်အခြေအနေ ကြေညာထားတာကြောင့် ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ပြည့်ပြည့်ဝဝ အလုပ်လုပ်နိုင်ဖို့အခက်အခဲရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် အဆိုလွှာကို တရားရုံး သတ်မှတ်ရက်မှာ ကျွန်တော်တို့ တာဝန်ရှိတဲ့အတိုင်း တင်သွင်းနိုင်ဖို့ အခက်အခဲရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် အဆိုလွှာ တင်သွင်းရက်ကို ၃ လ နောက်ဆုတ်ပေးဖို့ တရားရုံးကို မေတ္တာရပ်ခံခဲ့ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ တစ်လလောက်ကပါ။ တရားရုံးကလည်း ခွင့်ပြုခဲ့ရာမှာ အခုဆိုရင် ဇူလိုင်လအစား အောက်တိုဘာကျမှ တင်သွင်းရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အလားတူပဲ မြန်မာနိုင်ငံကလည်း ချေလွှာကို ဇန်နဝါရီလမှာ တင်သွင်းရမယ့် အစား ၃ လနောက်ကျပြီးမှ တင်သွင်းရတော့မှာပါ။
တစ်ဘက်မှာလည်း ကိုဗစ်-၁၉ ကြောင့် ကျွန်တော်တို့ စိုးရိမ်တာက ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာ ရှိနေတဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေဟာ တစ်နေရာကနေ တစ်နေရာကို သွားလာခွင့်မရှိဘဲ ကန့်သတ်ခံထားရပါတယ်။ တကယ်လို့ ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်မှုဖြစ်ရင် အဲဒီနေရာတွေက စိုးရိမ်စရာပါ။ နောက်ထပ် စိုးရိမ်စရာ အခြေအနေက ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ ကော့ဆက်ဘဇားက ဒုက္ခသည်တွေပါ။ ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာက လူတွေပြည့်ညပ်နေပါတယ်။ ဒီအခြေအနေကလည်း စိုးရိမ်စရာပါ။
ဘီဘီစီ။ ။ဂမ်ဘီယာက တင်သွင်းမယ့် အဆိုလွှာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အခုချိန်မှာ ဘာပြောလို့ ရမလဲ။
အဆိုလွှာမှာ ဘာတွေ ပါလဲဆိုတာကတော့ တရားရုံးကို တင်သွင်းတဲ့အချိန်ထိ စောင့်ဖို့ လိုပါတယ်။ အဲဒီအချိန်ကျရင် မီဒီယာတွေကို ပြောပြပါမယ်။ အခုချိန်မှာ ပြောနိုင်တာက ဒီအဆိုလွှာမှာ ကျွန်တော်တို့က မြန်မာနိုင်ငံကို တရားစွဲဆိုထားသလို မြန်မာက ရိုဟင်ဂျာတွေကို လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှု လုပ်နေပါတယ်ဆိုတဲ့ သက်သေအထောက်အထားတွေ ပါဝင်ပါမယ်။ ကြားဖြတ်စီမံဆောင်ရွက်ချက်အမိန့်ချပေးဖို့ ကျွန်တော်တို့ ပထမ တင်တုန်းက သက်အထောက်အထားတွေကို အားဖြည့်ထားတဲ့ အချက်တွေ ပါဝင်လာပါမယ်။
ဘီဘီစီ။ ။မြန်မာဘက်က ပထမအစီရင်ခံစာတင်ပြီးနောက် ဂမ်ဘီယာအနေနဲ့ နောက်တစ်ဆင့် ဘာဆက်လုပ်ဆောင်မလဲ။
ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ တရားရုံးက ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ ကြားဖြတ်စီမံ ဆောင်ရွက်ချက်အမိန့်ကို မြန်မာဘက်က အစီရင်ခံစာတင်သွင်းဖို့ တာ၀န်ရှိတဲ့အပေါ် ဆက်ပြီး စောင့်ကြည့်နေပါမယ်။ တစ်ပြိုင်နက်တည်းမှာပဲ မြန်မာဘက်က လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှု ရှိမရှိဆိုတဲ့ အမှုကြီးအပေါ် ကျွန်တော်တို့ဘက်က ဆက်လုပ်ဆောင်ပါမယ်။ ဒီအမှုကြီးက နောက်နှစ်အနည်းငယ်ကြာနိုင်ပါတယ်။ လောလောဆယ်တော့ မြန်မာဘက်က တင်သွင်းတဲ့အစီရင်ခံစာအပေါ် လိုအပ်ရင် ဂမ်ဘီယာဘက်က သင့်တော်သလို တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်သွားပါမယ်။
ဘီဘီစီ။ ။ ဂမ်ဘီယာဟာ အစ္စလာမ္မစ်နိုင်ငံများ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ အိုအိုင်စီ ကိုယ်စား ဒီအမှု တင်သွင်းခဲ့တာဆိုတော့ လက်ရှိ အိုအိုင်စီနဲ့ရော ဘာတွေ ဆက်လုပ်ဆောင်နေပါသလဲ။
လောလောဆယ် အဲဒီအကြောင်းတွေကို ကျွန်တော် ထုတ်မပြောနိုင်ပါဘူး။ ကျွန်တော်ပြောနိုင်တာကတော့ ဂမ်ဘီယာဟာ မြန်မာကို တရားစွဲဆိုထားတဲ့အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး အိုအိုင်စီဘက်က အားပေးမှုနဲ့ ထောက်ခံမှုတွေ အပြည့်အဝ ဆက်လက်ရရှိနေပါတယ်ဆိုတာကိုတော့ ကျွန်တော် အတည်ပြုနိုင်ပါတယ်။ ဒီအပေါ် ကျွန်တော်တို့ အမှန်တကယ် ဝမ်းမြောက်မိပါတယ်။
ဘီဘီစီ။ ။ အိုင်စီဂျေ တရားရုံးအနေနဲ့ အခု မြန်မာဘက်က တင်သွင်းတဲ့ အစီရင်ခံစာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘာတွေ ဆက်လုပ်ဆောင်ဖို့ ရှိတယ်လို့ သိရပါလဲ။
ဒီနေရာမှာ တစ်ဆင့်ချင်းစီ သွားရပါမယ်။ တရားရုံးက ကြားဖြတ်စီမံ ဆောင်ရွက်ချက် အမိန့်ထုတ်ထားတယ်။ အဲဒီအမိန့်ထဲမှာ မြန်မာဘက်က လေးလအကြာမှာ အစီရင်ခံစာတင်ရမယ်ဆိုတာလည်း ပါဝင်တယ်။ အခု မြန်မာဘက်ကလည်း ဒါကို လိုက်နာပြီး အစီရင်ခံစာ တင်သွင်းပြီးပြီ။ ဒီအစီရင်ခံစာကို ကျွန်တော်တို့ သုံးသပ်နေသလို တရားရုံးကလည်း သုံးသပ်နေမယ်ဆိုတာ သေချာပါတယ်။ မြန်မာဘက်က လိုက်နာမှုရှိမရှိဆိုတာ မစဉ်းစားခင် အခု ဒီအစီရင်ခံစာထဲမှာ ဘာတွေ ပါလဲဆိုတာ အရင်ကြည့်ရပါမယ်။
อัลบั้มภาพ အိုင်စီဂျေ- ဂမ်ဘီယာ တရားရေးဝန်ကြီး အဘူဘာကာ တမ်ဘာဒူကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်